Aghụghọ, Ngwaọrụ na Ndụmọdụ niile ndị ọrụ Mastodon kwesịrị ịma | Site na Linux
Usoro, Ngwaọrụ na Ndụmọdụ nke ndị ọrụ Mastodon niile kwesịrị ịma
N'ime ụwa nke netwọkụ mmekọrịta na-achịkwa, ndị ọzọ enwereghị onwe ha enwechaghị ihe ịga nke ọma, mana n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya enwere ọnọdụ pụtara ìhè iji netwọkụ mmekọrịta anaghị akwụ ụgwọ nke a kụrụ dị ka ụzọ dị njọ na netwọkụ mmekọrịta ọha, ọkachasị ndị ama ama elekọta mmadụ na netwọk Twitter. Ọmụmụ nke Mastodon, netwọkụ na-elekọta mmadụ microblogging, na-enweghị ego yana yana ụkpụrụ ndị metụtara nnwere onwe zuru oke, na-enye ọtụtụ ihe iji kwuo maka ya, yabụ ọ dị mkpa ka anyị chịkọta nchịkọta zuru oke nke na-enyere anyị aka ị nweta ọtụtụ uru na ya. uru kasịnụ na netwọkụ mmekọrịta n'efu nke oge a.
1 Gịnị bụ Mastodon?
2 Otu esi emepụta akaụntụ na Mastodon
3 Ndị aghụghọ na Atụmatụ maka Mastodon
3.1 Mastodon Isi Iyi Usoro
3.2 Ndepụta Mastodon Instance
3.3 Metụ ma ghara tweet
3.4 Mepụta oge Mastodon ma nwee ihe atụ nke onwe
4 Ngwaọrụ na ngwa ọdịnala maka Mastodon
4.1 Ndị ahịa
4.2 Ihe ndọtị Chrome
4.3 Ọba akwụkwọ na Api
Gịnị bụ Mastodon?
Mastodon bu ihe mepere emepe, netwọkụ na --ezighi ezi ma mekwaa ka ebido, nke amalitere n’etiti ọnwa Ọktoba afọ 2016 ma na - eto n'ike n'ike. Anyị nwere ike ịsị na Mastodon bụ ihe ọzọ yiri nke a ma ama na Twitter Social Network, dị iche na ya n'ike ibipụta steeti 500, yana nnwere onwe na njikwa anyị nwere na ọdịnaya anyị na-ebipụta ma na-agụ.
Ọrụ a microblogging Ọ na - enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta ihe anyị chere na steeti sara mbara (yiri tweets), nke nwere ike mejupụta ya na faịlụ multimedia, koodu ahaziri, mkpado, ma ọ bụ kpọọ ndị ọrụ ndị ọzọ nke netwọkụ mmekọrịta.
Ihe ịkọwapụta banyere Mastodon bụ ihe na-atọ ụtọ banyere usoro ya, nke a na-ekesa n'ọtụtụ oge (sava ​​ma ọ bụ ọnụ) nke na-eme omume kwụ ọtọ mana enwere ike ijikọ ya na ndị ọzọ, n'otu ụzọ ahụ, oge niile nwere nkwukọrịta na ihe a na-akpọ fediverse (nke dị ka ụdị ọkaibe na-achịkọta ha ọnụ). Nke a bụ ihe kpatara na ndị ọrụ nwere ike isonyere otu atụ wee mepụta onye ọrụ ha (chọrọ email ịdebanye aha), mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ dị iche iche nke ọrụ ahụ.
Otu esi emepụta akaụntụ na Mastodon
Mastodon A na-ekesa ya n'ọtụtụ ọnụ ma ọ bụ oge ebe anyị nwere ike ịdebanye aha yana nke ahụ na-ekwurịta okwu na oge ndị ọzọ, iji mepụta akaụntụ na Mastodon ọ zuru ezu na anyị ga-ahọrọ ihe atụ dabara na profaịlụ anyị ma mejupụta usoro ndebanye aha dị mfe. Thezọ kachasị mfe ma kwuo "ọkọlọtọ" nke ngwa ọrụ bụ ịdebanye aha na Netwọk, ma obu na ufodu n’ime otutu oge ndi nwere agwa di iche iche.
Okwesiri ighota na ihe omuma obula nke Mastodon nyere anyi ohere inwe otu obodo nke nwere ihe uto anyi, ebe anyi puru imebiga ihe ókè, ichikota, mekorita dika anyi choro. N'otu aka ahụ, ịmepụta akaụntụ ahụ n'otu ihe atụ anaghị egbochi anyị ịnụ ụtọ eluigwe na ala nke ihe atụ, yabụ enwere njikọ nke netwọkụ mmekọrịta.
Anyị ga-eburu n'uche na ịgbakwunye onye ọrụ na Mastodon anyị ga-eji URL zuru ezu nke profaịlụ Mastodon ha, ebe ọ bụ na njirimara onye ọrụ bụ njikọ nke aha aha ahọrọ mgbe ị na-edebanye aha + nke ihe atụ ahụ.
Ndị aghụghọ na Atụmatụ maka Mastodon
N'ịbụ onye na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike iji mee ka mastodon ahụ sie ike karị, na mgbakwunye na ịnwe ike ịmegharị ya na mmasị na mkpa anyị.
Mastodon Isi Iyi Usoro
Anyị nwere ike ịchọta koodu isi nke Mastodon Ebe aAnyị nwere ike ime ihe niile bifucarciones anyị chọrọ, mana ihe anyị na-akwado bụ ịnye ihe ọmụma anyị na ngalaba isi iji mee ka netwọkụ mmekọrịta a zuru oke karịa ka ọ dị.
Ndepụta Mastodon Instance
Nwere ike ịchọta ndepụta sara mbara nke usoro dị iche iche nke mastodon Ebe a, ọ na-akọwapụta njirimara nke atụ ọ bụla, aha ya, ohere nke ndebanye aha ma ọ bụrụ na ọ na-akwado usoro IPv6 ma ọ bụ.
Metụ ma ghara tweet
Na Mastodon, aha enyere ọrụ nke ịkekọrịta ọdịnaya na-agbanwekwa, okwu Tootear nọchiri okwu a ma ama na tweet, nke na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ.
Mepụta oge Mastodon ma nwee ihe atụ nke onwe
Oge bụ ihe ngosipụta nke netwọkụ mmekọrịta a, ebe anyị nwere ike ịmepụta ọtụtụ oge dịka anyị chọrọ ma eleghị anya ụfọdụ n'ime anyị ga-enwe mmasị ịnwe nke anyị. Nke a bụ ihe mere enwere ezigbo akwụkwọ na nke a, ebe ha na-akụziri anyị Mepụta ihe atụ Mastodon na Ubuntu 16.04 site na iji Docker na nginx na anyị nwere ike isoro ụwa kerịta, mana ọ tụrụ ọtụtụ ndị n’anya na anyị nwekwara ike inwe otu atụ mmadụ (ya bụ, atụ ebe enwere naanị otu onye ọrụ, dịka ọmụmaatụ, site na linux@fromlinux.net), na nke a ndu ha na-akuziri anyi etu esi eme ya.
N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere ike ịnweta a mkpokọta zuru oke ebe enwere otutu ozi di nkpa banyere okike nke ihe na Mastodon
Ngwaọrụ na ngwa ọdịnala maka Mastodon
Enwere ike ịchọta ndepụta nke ngwa na ngwa ọrụ kwekọrọ na Mastodon Ebe a. N'otu ụzọ ahụ, anyị gafere nyocha ngwa ngwa banyere ụfọdụ ngwaọrụ na ọba akwụkwọ anyị nwalere na Anya nnụnụ.
Nhazi: Ọ bụ ahịa ahịa mmeghe edere ede Elm site Nicholas Perriault, nke ahụ na-ejigide usoro imepụta ọdịnala nke ọma yana Mastodon API kwadoro, na-enyekwa ohere ịnabata ya na sava anyị ma ọ bụ iji ihe nkesa ọrụ. Na ya ụlọ ọrụ gọọmentị na github anyị nwere ike ịchọta usoro zuru ezu nke ntinye ya, yana ịnweta mmejuputa na sava Nicolas.
MSDN: Ọ bụ ihe na-emeghe, onye ahịa multiplatform (Linux, MacOs, Windows), nke mepụtara site na mmemme Electron site na onye mmemme Japanese, nke na-ewe ụdị mkpanaka nke netwọkụ mmekọrịta ma kechie ya na ngwa desktọọpụ, ọ nwere usoro nke arụmọrụ dị ka ọkwa desktọọpụ, ụzọ mkpirisi keyboard, nkwado ọtụtụ akaụntụ n'etiti ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta ozi kachasị akọwapụtara na ngwa ahụ github nke ya
totstream: Ọ bụ onye ahịa njikwa maka mastodon mepụtara na Python, usoro iwu iwu a na-enye anyị ohere ịmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta site na nkasi obi nke ọnụ anyị. Ọ nwere ọtụtụ akwụkwọ, na mgbakwunye na iwu ndị dị mfe iji, ebe ọ bụ na etolitere na eke, ntinye ya dị mfe, n'otu aka ahụ, ngwa a dakọtara na OAuth na 2FA, nke na-eme ka usoro nyocha ahụ sie ike karị. Ozi ndi ozo Ebe a.
Ihe ndọtị Chrome
Tooter: Ọ bụ ndọtị oghere maka Chrome, nke na-enye anyị ohere ịkekọrịta ọdịnaya na Mastodon n'ụzọ dị mfe, n'otu ụzọ ahụ ọ nwere nkwado maka twitter. Nke a bụ ndozi dị mfe mana ọ ga-azọpụta anyị oge dị ukwuu, ịnwere ike iwunye ya Ebe a.
Ọba akwụkwọ na Api
Mastodon.py: Ọ bụ ihe mkpuchi na-emeghe maka eke na-enye anyị ohere ịmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta na ngwa ngwa, ọ nwere ụzọ doro anya ga-eme ka ndụ anyị dịkwuo mfe mgbe mmemme mmemme na eke chọrọ iji mkparịta ụka mastodon. Enwere ike inweta ozi ndị ọzọ gbasara ojiji ya na itinye ya n'ọbá akwụkwọ Ebe a.
mastodon-api-cs: Ọ bụ ọba akwụkwọ mepere emepe maka C # nke na-enye anyị ohere ịjụ data ndị ahịa Mastodon mfe na ọkwa dị elu. Ọ nwere mmejuputa usoro nke arụmọrụ ga-enyere anyị aka itinye ngwa na C # nke na-emekọ ihe na mastodon site na iji obere iwu, ị nwere ike ịbanye na ọba akwụkwọ a ebe a.
mastonet: Ọbá akwụkwọ mmeghe ọzọ maka C #, yana nkwado maka OAuth, Streamingkpụrụ gụgharia yana ijikọ ya na usoro .net. Enwere ike ịchọta ozi gọọmentị nke ụlọ ahịa akwụkwọ Ebe a.
mastodon-api: Ruby programmers nwere ugbu a siri ike na-emeghe isi API maka asụsụ a, nkọwa nke ntinye ya, ojiji na akwụkwọ nke ụzọ ya nwere ike ịchọta. Ebe a.
MastodonKit: Ihe magburu onwe ya na-emeghe oghere SWIT nke na-ekpuchi Mastodon API, na-enye ọtụtụ ọrụ, yana nkwado zuru oke na akwụkwọ zuru ezu. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara MastodonKit ebe a.
Anyị nwere olile anya iji akwụkwọ, aghụghọ, ndụmọdụ na ngwaọrụ dị iche iche anyị ga - achọpụta maka netwọkụ mmekọrịta a nke anyị niile kwesịrị inye ohere.
Nakwa ọkwa na site taa gawa ị nwere ike iso anyị na mastodon na akụkọ ndị a:
Sincelinux na akaụntụ akaụntụ na Mastodon.net: @IGIHE
Akaụntụ nke m na Mastodon.net: @nkechi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Usoro, Ngwaọrụ na Ndụmọdụ nke ndị ọrụ Mastodon niile kwesịrị ịma
Anọ m na-eche FromLinux ịza ajụjụ ya na Mastodon.
Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ibuli onwe anyị. Daalụ nke ukwuu bara uru Ama. Ugbo;
Ọ bụ ihe dị ugbu a anyị na-amụ ma na-achịkwa, na-aghọta na njikwa nke ihe atụ gụnyere iri ọtụtụ akụnụba nke anyị nwere ike ọ gaghị enwe ugbu a.
Enweghị m ike ịhụ gị na Mastodon n'ihi na akaụntụ m dị na mastodon.social ma ọ bụghị na mastodon.network
Chetara ndị ọrụ na ịkekọrịta akaụntụ Mastodon gị ị ga-egosi na nsonye Mastodon so na ya. Ihe Nlereanya:
@ lizard @ mastodon.network
Na url m tinyere ya na-ewe gị ozugbo, ezigbo
elu ọnụ dijo
Ndewo. Izu ụka ole na ole gara aga, abanyeghị m MastodonES. Site na ihe nchọgharị ọ na-enye m njehie mgbe m na-ebuba peeji mbụ http://mastodones.club na site na Tusky na android adighi ebu ya. Echere m na ọ nwụọla. Agbalịrị m itinye oge ndị ọzọ na data nnweta m mana ọ na-ekwu na ha anaghị adaba Ọ pụtara na aha m furu efu na ihe niile m na-emekọrịta na netwọkụ a? Enweghị m ike ịkwaga onye ọrụ m na ọnụ ọzọ? Enwere m olile anya na enwere onye nwere ike inyere m aka. Daalụ nke ukwuu
Nzaghachi nke ọma
Windows ọ chọrọ ka Linux bụrụ otu n’ime ngwaahịa gị?
Etu esi ejikwa oge site na njikwa na ding